Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any UK » Mpitondra fahasalamana ho an'ny Governemanta UK: Atsaharo ny fipetrahana eo amin'ny fefy COVID » Page 2
Ny fanehoan-keviny dia tonga taorian'ny fizarana zotram-pitaterana an'habakabaka sy orinasam-pitaterana manerana an'i Eropa izay nilentika tamin'ny herinandro lasa ka nanosotra olona an-tapitrisany maro. IAG izay manana British Airways no nahita ny anjarany nihena indrindra tamin'ny 15%, raha EasyJet kosa nilatsaka 10%, TUI AG 8.9%, ary Ryan Air 7.4%. Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka eropeana hafa koa dia nanaraka izany ary nihena ny vidiny noho ny tsy fahazoana antoka ny tsena fialantsasatra fialantsasatra sy ny dia lavitra iraisampirenena.
Dr. Brendan Payne, dokotera mpanolotsaina sy mpitsabo areti-mifindra, izay nanoro hevitra an'i Akea Life, mpamatsy serivisy ho an'ny Salutaris People, dia hijanona miaraka amin'ny fepetra takiana mba hisaron-tava mandritra ny 19 taona manaraka amin'ny endrika rivotra rehetra. fitsangatsanganana.
"Ny NHS sy ny fahasalamam-bahoaka Angleterre (PHE) dia mila mitazona ny fahafaha-manao fitsapana COVID mandritra ny fotoana tsy voafetra. Ny COVID dia tsy hesorina amin'ny vaksiny, ary mila mitady vahaolana maharitra isika hiaina miaraka aminy. Ny programa mavitrika amin'ny fanandramana COVID dia zava-dehibe ho fiarovana lehibe amin'ny onja vaovao sy ny karazana vaovao manimba ny tombotsoantsika amin'ny vaksiny. Tsy hitako ity miova farafaharatsiny amin'ny taona manaraka ary angamba lava kokoa. Ny tranga mety hitranga mandritra ny taona vitsivitsy dia ny "hazakazaka sandoka" mitohy eo amin'ireo karazana COVID sy vaksiny vaovao. Ny fanandramana COVID miparitaka dia tena manandanja sy manakiana tokoa amin'ny fandresena amin'izany ady izany.
"Ho an'ny dia izay avela amin'ny fahavaratra 2021, antenaiko fa hitohy hiankina betsaka amin'ny fitsapana fitsangatsanganana mialoha (sy aorian'ny) izany. Heveriko fa ny satan'ny fanaovana vaksiny dia hisongadina be amin'ny fitsipiky ny fizahan-tany ho an'ny ankamaroan'ny firenena amin'ity taona ity. Ny vaksinin'ny COVID amin'izao fotoana izao dia 80% eo ho eo no mahomby ary tsy ny rehetra no hanaiky hanao izany. Hisy hatrany ny aretina COVID maromaro eo imasom-bahoaka, na eo aza ny vaksiny miely. Eny tokoa, amin'ny lafiny maro dia lasa zava-dehibe kokoa ny fanandramana be vava raha vao mihena ny isa COVID, satria mila mahafantatra haingana araka izay tratra ianao raha manomboka tsy mahafehy ny toe-javatra intsony. Zava-dehibe izany amin'ny famaritana haingana ireo teboka mararin'ny aretina izay miakatra.
“Amin'ny taona 2022, manantena ianao fa mety hanana fitsipika iraisam-pirenena marobe momba ny fitsangatsanganana an-habakabaka isika. Mety hanasongadina ny toeran'ny vaksiny io, na izany aza, mbola hitako fa misy andraikitra lehibe amin'ny fitsapana, angamba ny 'porofon'ny vaksiny' ary ny fitsapana 'ratsy' no ho fitsipika. Heveriko fa ny sarontava dia saika ilaina amin'ny karazana fitaterana rehetra, farafahakeliny 3 taona ho avy, ary mety tena lavitra. "
Ny olona Salutaris izay manana tobim-pitsaboana COVID-19 manerana ny faritra avaratrandrefan'i Angletera dia miasa ihany koa ankehitriny amin'ny fisoratana anarana UKAS sy ny sata ISO / IEC 17025 mifanaraka amin'ny tolo-kevitry ny governemanta mifehy ny serivisy fitiliana COVID-19 an'ny sehatra tsy miankina.
Ben Paglia MD avy ao amin'ny Akea Life, ilay mpiara-miombon'antoka klinika ao Salutaris, dia nilaza hoe: "Ny governemanta dia mila manolotra daty marim-pototra mazava amin'ny famerenana ny dia an-habakabaka, na dia mandeha tsikelikely aza izany. Ny firenena 'toerana mafana' sasany dia azo ferana amin'ny fivezivezin'ny rivotra mandra-pahatongan'ny haingana ny programa fanaovana vaksiny, saingy tsy maintsy ampiarahina amin'ny fizahana COVID-19 mahazatra.
“Ny varotra sy ny dia ilaina dia afaka manokatra voalohany arahin'ny fialamboly sy fitsangatsanganana fialantsasatra. Ireo mpandeha dia mety ho fantatra amin'ny hoe 'Fit to Fly' satria nanao vaksiny sy / na nosedraina PCR izy ireo, miaraka amin'ny fitohizan'ny fanaovana saron-tava miaraka amin'ny fitsinjaram-pahefana manara-penitra sy ny fanadiovana ny tanana. Farafaharatsiny amin'ity fomba ity dia hanomboka handroso kely isika ary hanana antoka momba ny orinasam-pitaterana an'habakabaka sy fitsangatsanganana. Amin'izao fotoana izao dia olona marobe no mijaly noho ny havizanana fanidiana, olana ara-pahasalamana, fitaintainanana ary fahaketrahana. Ny fahaizana mandamina sy mamandrika sidina na fialantsasatra fotsiny dia hanome hazavana amin'ny faran'ny tionelina ary hampiakatra ny fanahin'ny olona marobe. ”